Wararka - Iibinta gawaarida cusub ee yurubiyanka waxay sare u kacday 1.1% sanadkii-bishii Sebtember: ACEA
Diiwaangelinta gawaarida Yurub ayaa waxyar kor u kacday bishii Sebtembar, kororkii ugu horreeyay ee sanadkan, xogta warshadaha ayaa muujisay jimcihii, taasoo soo jeedinaysa soo kabashada qaybta baabuurta ee suuqyada Yurub qaarkood halkaasoo infekshannada coronavirus ay ka hooseeyeen.
Bishii Sebtembar, diiwaangelinta gawaarida cusub ayaa kor u kacday 1.1% sanadkiiba illaa 1.3 milyan oo baabuur ah oo ka tirsan Midowga Yurub,
Ingiriiska iyo Ururka Ganacsiga Xorta ah ee Yurub (EFTA), tirakoob laga soo saaray Ururka Soosaarayaasha Baabuurta Yurub (ACEA) ayaa muujiyay.
Shanta suuq ee ugu waaweyn Yurub, si kastaba ha ahaatee, waxay soo bandhigeen natiijooyin isku dhafan. Spain, Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa soo sheegay khasaaro, halka diiwaangelintu ay sare u kacday Talyaaniga iyo Jarmalka, xogta ayaa muujisay.
Iibka Volkswagen Group iyo Renault ayaa kor u kacay 14.1% iyo 8.1% bishii Sebtember siday u kala horreeyaan, halka PSA Group ay soo sheegeen hoos u dhac dhan 14.1%.
Baabuurta raaxada ayaa soo daabacay khasaarihii bishii Sebtember iyada oo iibka BMW uu hoos u dhacay 11.9% halka shirkadda Daimler ee la tartameysa ay hoos u dhacday 7.7%.
Sagaalkii bilood ee sannadka ugu horreeyay, iibku hoos ayuu u dhacay 29.3% maaddaama qufulka bakteeriyada loo yaqaan 'coronavirus quful' uu ku qasbay gawaarida sameeya inay xiraan carwooyinka Yurub oo dhan.
Waxqabadka iyo Doorarka
Qalabka wax lagu shubo ayaa lagu rakibay inta u dhexeysa jirka gaariga iyo taayirka, oo ay weheliso il. Dabacsanaanta qulqulatada guga ee ka timaada dusha sare ee wadada, si kastaba ha noqotee, waxay ku keentaa gaariga inuu gariiriyo astaamaha adkeysiga awgood. Qeybta waxay u adeegtaa jahwareerka qoyan waxaa loogu yeeraa "shoog nuugis", iyo xoog iska caabinta muuqaalka leh waxaa loo yaqaan "xoog qodaya".
Nalalka shoogga waa shey muhiim ah oo go'aamiya astaamaha baabuurta, kaliya ma aha hagaajinta tayada raacida laakiin sidoo kale iyadoo la shaqeynayo si loo xakameeyo dabeecadda iyo xasilloonida gaariga.
Hood Shooga Nuugista, Gawaarida Hub, Jabinta Steering Front, Wadajirka Kubadda Tire, Naxdinta Rubber Rubber, Naxdinta Nuugista Bolt,